Chinja, dhawunirodha uye gadzirisa mavhidhiyo neVideoProc | IPhone nhau
Chinja, Dhawunirodha uye Gadzirisa Mavhidhiyo neVideoProc [Yakatemwa Nguva Yakakosha Offer]
Zvisinei nesocial network yaunoshandisa, iwe uchaona kuti zvese zviri zviviri Facebook neTwitter zvakazara nevhidhiyo. TickTock yavewo yekurova vakawanda, kunyanya munyika dzakaita seIndia. Kana iwe uchida kushanda nemavhidhiyo Kana iwe unoda kuzviita asi hauna kuwana chete chishandiso chakakodzera nhasi tiri kutaura nezveVideoProc.
VideoProc ndeimwe yeanonyanya kushandiswa mafomu iyo yatinogona kuwana parizvino pamusika, chishandiso chinotibvumidza kuti tiite chero chiito chinouya mupfungwa nemhando iyi Kubva pakugadzirisa uye kuwedzera mafirita kurodha pasi mavhidhiyo kubva pane chero chikuva, kutendeukira kune chero fomati kana kutorekodha skrini yeyedu kifaa
Sezvauri kuona muvhidhiyo mharidzo yeVideoProc, ichi chishandiso chinotipa kuita kwakawanda kwatisingazowane mune chimwe chikumbiro. Kana tichida boka rese mashandiro mune imwechete application (ndiyo nguva dzose sarudzo yakanakisa) VideoProc ndiyo application yatiri kutsvaga. Pazasi isu tinokuratidza iwe ese mashandiro ayo inoyevedza kunyorera anotibvumidza isu kuti tiite.
1 Kugadzirisa uye kushandura vhidhiyo nemumhanzi kune akawanda mafomati
1.1 Cheka uye Kurima Mavhidhiyo
1.2 Wedzera mafirita
1.3 Subtitling mavhidhiyo
1.4 Tenderera Mavhidhiyo
2 Bvarura maDVD
3 Dhawunirodha YouTube Vhidhiyo
4 Nyora chidzitiro chemidziyo yedu
5 Edza VideoProc
Kugadzirisa uye kushandura vhidhiyo nemumhanzi kune akawanda mafomati
VideoProc yakanaka chikumbiro che gadzirisa uye shandura mavhidhiyo kune chero imwe fomati. Kana ruzivo rwedu rusina kunyanya kukwirira kubva pachishandiswa pacharo, tinogona kusarudza kuti ndeapi maturusi atinoda kuridza vhidhiyo kuitira kuti application iite otomatiki sarudza fomati yakakodzera kwazvo. Uye zvakare, tinogona zvakare kushanda nemafaira ekuteerera, kuti tikwanise kugadzira edu enziyo nziyo nenzira yakapusa.
Kana tichida kugadzirisa mavhidhiyo, chishandiso ichi chinotibvumidza ku:
Cheka uye Kurima Mavhidhiyo
Kana isu tichida kuchengeta kana kugovana chikamu chevhidhiyo, tinogona kuzviita nekukurumidza uye nyore kuburikidza nechishandiso nebasa rezvirimwa. Uye zvakare, zvinotibvumidza isu cheka zvimwe zvikamu zvevhidhiyo (sekunge isu taive tichishandisa kudzvinyirira) muchikamu chevhidhiyo. Iko kunyorera kuchachengeta kubatanidzazve zvikamu zvevhidhiyo zvakatemwa.
Mafirita ekugadzirisa mhedzisiro anowanikwa muVideoProc application. VideoProc inoita kuti mafirita awanikwe kwatiris: grayscale, isina kunaka, ruzha, kuratidzira, ina-ruvara, lens gadziriso, vignette, RGB mazinga, muganho, mosaic, emboss, sepia, pendi yemafuta, kurodza, kupararira, uye technicolor.
Zvinotitenderawo wedzera zvinyorwa zvidiki kumavhidhiyo. Nekuda kwebasa iri, tinogona kuwedzera zvinyorwa zvidiki kumafirimu atinoda zvakanyanya kana atisingakwanise kuwana mumutauro wedu asi isu tagara tichida kuwana mukana wekuona.
Chokwadi pane kanopfuura kamwe chiitiko wakambove nerombo rakaipa rekufambisa nharembozha yako sekondi imwe mushure mekutanga kurekodha kuitira kuti uwedzere nzvimbo yekuona yekurekodha, asi mudziyo hauna kuigadzirisa uye vhidhiyo yapfurwa yakatwasuka. NeVideoProc isu tinokwanisa kushandura zviri nyore mamiriro evhidhiyo kuitira kuti tirege kutendeuka misoro kuti tifarire.
Kana tikangopinda munyika yezvigadzirwa zvakasikwa neVideoProc, uye tinoda chengetedza basa redu, zvakanakisa zvatingaite kuwedzera watermark. Ichi chishandiso chinotibvumidza isu kuti tiwedzere anosvika matatu mitsara yezvinyorwa, seta saizi uye font, pamwe nekutipa isu mukana wekuwedzera mufananidzo. Mune ino kesi, sarudzo yakanakisa ndeyekushandisa mufananidzo muPNG fomati uko iko kumashure kuri pachena.
Chokwadi kumba une DVD ine muchato wevabereki vako, yako, kubhabhatidza kwemuzukuru ... kana bhaisikopo rekare rausingakwanise kuwana mune chero vhidhiyo yekushambadzira sevhisi. Kutenda VideoProc tinogona kubvarura chero DVD kumavhidhiyo mafaera. VideoProc inoshandisa kumhanyisa Hardware Naizvozvo, kwete chete processor inoshanda, asi iwo magiraidhi ane timu yedu anoshandawo, saka nguva yekushandurwa yakadzikiswa zvakanyanya.
Dhawunirodha YouTube Vhidhiyo
Kudhaunirodha mavhidhiyo eYouTube ndeimwe yekutsvaga kwawakaita kana kuita kazhinji paGoogle. Kunyangwe chiri chokwadi kuti padandemutande tine zvatinazvo zvikumbiro zvakasiyana zvinotibvumidza kuti tiite basa iri, iyo iyo iyo VideProc inotipa yakazara zvakakwana, kwete chete nekuti inotipa nhamba huru yemavhidhiyo mafomati asi zvakare nekuti zvakare inotibvumidza kurodha chete odhiyo yemavhidhiyo, yakanakira kurodha mimhanzi yedu yatinofarira tisingashandisi kurodha mapeji.
Imwe bhenefiti yaanotipa ndeyekuti tinokwanisa wedzera huwandu hukuru hwezvisungo kuti usiye kurodha pasi tichiri kushandisa zvimwe zvinoshandiswa, tinoenda kunotora kofi, isu tichiona edu akada nhevedzano… VideoProc inotibvumira kwete chete kurodha mavhidhiyo kubva kuYouTube, asi zvakare inotibvumidza kurodha mavhidhiyo kubva kuFacebook, Vimeo uye anopfuura mawebhusaiti chiuru.
Nyora chidzitiro chemidziyo yedu
Kana isu tichida kurekodha chinovhara checomputer yedu patinonakidzwa nemutambo wedu watinofarira, patinotaura nemhuri yedu kuburikidza neSkype, kana kana tichida kuita dzidziso yekutsanangurira vabereki vedu maitiro ekuita chimwe chinhu kana kutsanangura mashandiro anoita, neVideoProc isu zvakare tine sarudzo ye rekodhi skrini.
VideoProc inotibvumidza isu kuti tiwedzere mukuwedzera kwesarudzo yechiratidziro yatinoda kurekodha, taura nzvimbo yakatarwa kwatinoda kuisa kurekodha, simbisa kuti ndiyo odhiyo yemutambo kana kunyorera izvo zvakanyorwa kana kushandisa maikorofoni yemidziyo yedu kutsanangura matanho ekutevera.
Kwemazuva mashoma, isu tinokwanisa kutora mukana wekupihwa kwatinoitirwa nevakomana veVideProc uye uwane Hupenyu hwese rezinesi ye30,95 euros chete. Iri rezinesi rinotibvumidza kushandisa kunyorera pasina chero miganho maererano nekugadzirisa vhidhiyo mukuwedzera pakubvisa watermark iyo inosanganisira mune zvese zvinyorwa kana edhisheni dzatinoita nekushandisa.
Kana iwe wagara uchida kushanda nemavhidhiyo asi usati wambowana chishandiso chinokutendera iwe kuti uite aya ese mabasa, haufanire kupotsa pane ino inonakidza kupihwa. chipo chinenge chichiwanikwa kwemazuva anotevera manomwe uye kwaunogona kuwana kubva iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Chinja, Dhawunirodha uye Gadzirisa Mavhidhiyo neVideoProc [Yakatemwa Nguva Yakakosha Offer]
Iwe unogona ikozvino kuisa Apple TV + paAmazon's Fire TV Stick
UAG Monarch, runako uye chikara chemakesi eiyo iPhone yako